Tuesday, 04.07.2020, 03:53pm (GMT+5.5) Home Contact
समय जति बित्दै छ, उति विमति सिर्जना हुँदैछ
Monday, 12.17.2012, 06:34pm
आजको प्रयास असफल भए भोलिको प्रयासले केही नतिजा दिन्छ, भोलि पनि नभए पर्सि त पक्कै केही न केही कुरा दिन्छ दिन्छ । वार्ता वा छलफलमा बसिसकेपछि हुन्छ वा हुँदैन भन्ने स्पष्टै हुनुपर्छ तर नेपालमा राजनीतिक सहमतिका लागि भनेर जति वार्ता भएका छन् सबै विना निष्कर्ष टुंगिएका छन्, समय क्रमसंगै वार्तामा बसेका समूहहरूबीच विमति सिर्जनाको प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । दलहरुबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भैसकेपछि समेत विमति सिर्जना गरिएको दृष्टान्त अनेक छन् ।
प्रमाणपत्र मात्र भिराउने कि क्षमता पनि बढाउने ?
Tuesday, 12.11.2012, 03:43pm
पाठ्य पुस्तक कम र गेस पेपर तथा गाइडको भर बढी पर्ने गरिएका कारण विद्यार्थी उत्तीर्ण संख्या जति नै बढे पनि दक्ष जनशक्तिको उत्पादन हुन सकेको छैन । गेस पेपरमुखी शिक्षाले गर्दा विद्यार्थीहरूले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र त बोक्छन् तर हाँसिल गरेको योग्यता अनुसारको क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्तैनन् ।
राष्ट्रियभन्दा व्यक्तिगत आकांक्षा हावी
Monday, 12.03.2012, 04:02pm
ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले संस्थागत गर्न सकेका छैनन् । व्यक्तिगत स्वार्थको भारीले थचक्कै भएका नेताहरुमा राष्ट्रिय भावना र त्यागको प्रचूर अभाव देखिएको छ । मुलुकले नेताहरुबाट त्यागको माग गरिरहेको भए पनि त्यो अत्यन्त दुर्लभ बन्न पुगेको छ । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम अत्यन्त दूषित बन्दै गएको छ ।
पोशाक संहिता विद्यालयलाई मात्र ?
Wednesday, 11.28.2012, 05:58am
सरकारले राजधानी लगायत मुलुकका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट संचालित उच्च माविका विद्यार्थीहरूका लागि पोशाकको मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । विशेष गरी निजी क्षेत्रबाट संचालित उच्च माविमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको पोशाक भड्किलो भएको आम गुनासो आएपछि त्यसलाई मर्यादित बनाउन त्यस्तो तयारी गरिएको हो ।
बढ्दो भोकमरीसंगै हतियार व्यापारको वृद्धि
Tuesday, 11.20.2012, 04:24pm
विश्वमा खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउन थालेको छ । यसका अनगिन्ती कारणहरूमध्ये जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण हो । सहायक कारणमा बढ्दो जनसंख्यालाई लिने गरिएको छ तर विडम्बना के भने खाद्यान्न उत्पादन घट्दै गए पनि हतियारको उत्पादन भने बढिरहेको छ । अमेरिकाले इराक र अफगानिस्तानको युद्धका लागि खर्चेको रकम गरिब मुलुकमा खाद्यान्न उत्पादनका लागि खर्च गरिएको भए करोडौं मानिसको भोक शान्त हुन्थ्यो । खाद्यान्न जीवन बचाउन नभै नहुने वस्तु हो भने हतियार जीवन समाप्त पार्ने विनाशक वस्तु ।
शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिकरणको मार
Tuesday, 11.13.2012, 05:26pm
मुलुकको अन्य निकायमा भन्दा शैक्षिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप चर्को हुने गरेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण विगतमा देश बाहिर समेत ख्याति कमाएका प्रतिष्ठानहरू यतिबेला आफ्नो शाख गुमाउँदै जान थालेका छन् । योग्य, स्वतन्त्र र स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर ती प्रतिष्ठानहरूको गुणस्तर अझ उकास्दै जानुपर्नेमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेर राजनीतिक स्वार्थकै आधारमा संस्थामा चलखेल हुँदा ती निकायको अस्तित्व नै संकटमा पर्न थालेको छ ।
नेपाली कांग्रेस र पुनःस्थापनाको मुद्दा
Tuesday, 11.06.2012, 03:23pm
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको ताजा जनदेशका लागि आवधिक निर्वाचनमा जानु हो । तर नेपालमा ताजा जनादेशमा जाने कुरालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दैआएका दलहरू र तिनका बहुसंख्यक नेताहरूले सजिलै स्वीकार्दैनन् र चुनावको प्रसंग उठ्नासाथ त्यसै डराउँछन् । विगतमा विघटित संसदको चुनावको माग नगरी पुनःस्थापनाको माग गरियो र त्यसका निम्ति आन्दोलनको लहर नै उठाइयो ।
राष्ट्रिय सोचको अभाव नै अहिलेको अबरोध
Tuesday, 10.30.2012, 09:38am
संविधानसभा विघटन भएको पाँच महिना बितिसकेको छ । यसबीचमा मुलुक हरक्षण संकटको दिशातिर मात्र उन्मुख छ । सन्तोष गर्ने कुनै विषय र सन्दर्भ नै छैन । संवैधानिक र राजनीतिक संकटको निकासका नाममा वितेका पाँच महिनामा भएको खेलले मुलुकले निकास नै नपाउने र राष्ट्र विघटनको संघारमा पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता व्यापक रुपमा उठिरहेको छ ।
मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने चिन्ता
Monday, 10.15.2012, 03:49pm
लोकतन्त्र वहालीपछि मुलकमा जस्तो परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो सब पानीको फोका जस्तो बिलाउन पुगेको छ । राजनीतिक परिवर्तनमा सफलता हात पारेका नेताहरूले मुलुकको आर्थिक—सामाजिक रुपान्तरणमा पटक्कै ध्यान दिन सकेनन् ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेताहरूको चरित्र
Monday, 10.01.2012, 08:11pm
मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता यतिबेला निकै कमजोर रहेको जगजाहेर विषय हो । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले मुलकको अवस्था जटिल रहेको बताइरहे पनि निदानका कुनै उपाय निस्किएको छैन ।
जनस्वास्थ्यमा अनुदार सरकारी कदम
Monday, 09.24.2012, 04:30pm
नेपालमा वर्षेनी १५ देखि २५ लाख मानिस सूर्ती र सूर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट लाग्ने रोगका कारण प्रभावित हुने गरेको ज्ञात भएको छ । मदिराजन्य पदार्थको सेवनले उत्पन्न गरेको समस्या पनि त्यत्तिकै ठूलो छ । यसबाट सामाजिक अपराध बढ्नुका साथै आर्थिक क्षति समेत भैरहेको छ । यस्तो गम्भीर विषयबारे सरकारले अहिलेसम्म चासो दिएको छैन । राजश्व उठाउने शैलीमा मात्र मदिरा र सूर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरण गर्न दर्ताको आव्हान गर्ने सरकारले त्यस्ता पदार्थको विक्री वितरणका लागि निश्चित मापदण्ड तोक्न सकेको छैन ।
प्रहरी संगठन : राजनीतिकरणको शिकार
Tuesday, 09.18.2012, 02:56pm
विगत एक महिनायता प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री तथा सत्तारुढ दुई दल एमाओवादी र मधेशी मोर्चाबीच जुन संघर्ष चल्यो त्यो प्रहरी संगठनमाथि राजनीतिक प्रभाव बढाउने मेसो बाहेक अरु केही पनि होइन ।
विकल्प नभए सहमति किन भएन
Monday, 09.10.2012, 05:03pm
अन्तरिम संविधान जारी भएदेखि नै राजनीतिक सहमतिको नारा घन्काई घन्काई अहिलेको अवस्था सिर्जना गरियो । विधिविधान बमोजिम हुनुपर्ने कामहरू राजनीतिक सहमतिको नाममा केही सीमित नेताको घरको बैठकमा लगेर थुपारिंदा मुलुकले आजको अवस्था भोग्दै छ । सहमतिको राग अलापेर विमतिका स्वरहरू गुञ्जाउने प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरू अहिले पनि सहमतिको विकल्प छैन भनिरहेका छन् ।
खडेरी परेको राजनीतिक नैतिकता
Monday, 09.03.2012, 08:37pm
मुलुकको राजनीतिमा सबभन्दा खडेरी परेको पक्ष नै नेताहरूले गुमाउँदै गएको नैतिकता हो । राजनीतिमा नैतिकताको उच्च महत्व हुने भए पनि उनीहरूले त्यस्तो आचरण र व्यवहार देखाउन सकेका छैनन् । पञ्चायतकालमा केही नेताहरूले देखाएको राजनीतिक नैतिकता नै अहिले पनि उदाहरणका रुपमा लिनुपर्ने अवस्था छ ।
भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण
Monday, 08.27.2012, 04:52pm
नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचार यति दह्रोसंग जकडिएको छ कि यसबाट छुटकारा पाउने उपाय अवलम्बन गर्न राजनीतिक नेतृत्व कहिल्यै पनि अग्रसर देखिएन बरु भ्रष्टाचारीलाई जागाउन लागिप¥यो । भ्रष्टाचारी राष्ट्रको दुश्मन हो भन्ने मान्यता हरायो, उनीहरू कसैका मित्र हुँदैनन्, कुनै सिद्धान्त र आस्थाका प्रतीक हुँदैनन् भन्ने सोच बिलायो ।
सहमतिको नारा अलाग्दै द्वन्द्वको सिर्जना
Monday, 08.20.2012, 04:12pm
राजनीति सहमतिको साटो भिडन्तको दिशातिर उन्मुख छ । सत्ता पक्ष र विपक्षीहरू आआफ्नै अडानमा रुल्मलिदै गर्दा राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ भने राष्ट्र असफताको चिन्ता पनि संगसंगै जागृत छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरू सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्नुपर्नेमा द्वन्द्व बढाउने खेलतिर अग्रसर भैरहेका छन् ।
आफ्नो पहिचानको रक्षा गर
Tuesday, 08.14.2012, 01:04pm
मुलुकको राष्ट्रियता खतरामा परेको धेरैको मुखबाट सुनिन्छ । शीर्ष तहका नेतादेखि सामान्य राजनीतिक–सामाजिक कार्यकर्ता समेत अहिले यस्तै भनिरहेका छन् । घटनाक्रमहरूले त्यसलाई पुष्टि पनि गरिरहेको छ । यतिबेला सबैको ध्यान सत्ता राजनीतितिर मात्रै केन्द्रित भैरहेको र यस्तो बेला नेपालको राष्ट्रिय गहनाका रुपमा रहेको जाति, भाषा, संस्कृतिमाथि चरम हस्तक्षेप भैरहेको छ ।
राष्ट्रियता गम्भीर खतरामा
Monday, 08.06.2012, 05:19pm
विगतमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमा विश्वका कुनै पनि शक्तिले आँखा लगाउन सकेन । पूरा भारत बेलायतको बुटमुनि पिल्सिएका बेला पनि नेपाली वीरहरूले यो मुलुकलाई जोगाएर राखेका थिए । पुर्खाले देखाएको वीरताको अहिले कदर हुन सकेको छैन । सत्ता र शक्तिका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने नेपालका राजनीतिक दलका केही नेताहरूको स्वार्थका कारण मुलुक दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गैरहेको छ ।
जनदवावका सामु कसैको केही लाग्दैन
Monday, 07.30.2012, 04:18pm
कुनै व्यक्तिले आफ्नो सुख–सयलका लागि मुलुकलाई दीर्घकालीन अहित हुने काम गर्छ भने त्यो व्यक्ति घोर राष्ट्रघातीका रुपमा चिनिन्छ । यस्तै राष्ट्रघाती प्रधानमन्त्रीका रुपमा डा बाबुराम भट्टराईका गतिविधिहरू भैरहेका छन् । उहाँले मुलुकको आर्थिक विकासको नाममा भारतीय लगानीलाई राष्ट्रिय संरक्षण गर्ने गरी बिप्पा सम्झौता गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको सुविधा मोहको लाभ अरुलाई
Monday, 07.23.2012, 04:41pm
राष्ट्रका लागि योगदान दिएकाहरूलाई राष्ट्रले सम्मान दिनुपर्छ । यसमा कसैको पनि विमति छैन । तर नेपालमा के देशका लागि मरिमेट्नेहरूले सम्मान र सुविधा पाएका छन् त रु अहिले यस्तै प्रश्न जताततै सुनिन्छ । सत्तामा पुगेकाहरूका लागि मात्र राष्ट्रको सुविधाको ओइरो लाग्ने गरेको छ । जो आफैंमा सम्पन्न छन्, उनीहरूलाई गरीब नेपाली जनताको पसिनाबाट अथाह सुविधा दिनु कति उपयुक्त हुन्छ रु यो पनि विश्लेषणको विषय बनेको छ ।
» नेपालको भाषिक एकीकरण र भानुभक्त
» राजनीतिमा निष्ठा हराउँदाको परिणाम
» स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिले संविधान बनेन
» एसएलसी परीक्षाको दुर्दशा
» सहमतिको राग अलापेर विमतिको खेती
» शान्ति सुरक्षाको नाजुक अवस्था
» वस्तुलाई विषय बनाउनु नै रुपान्तरण हो
» कहाँ गयो त्योबेलाको जनउत्साह ?
» गलत प्रवृत्तिले हरायो मौलिकता
» बुद्ध जयन्तीलाई राष्ट्रसंघीय दिवस बनाउ
» जनताको ध्यान अन्तै मोड्ने प्रपञ्च
» राष्ट्रियता, वाम राजनीति र वर्तमान अवस्था
» विगतका कमजोरीहरूको समीक्षा गरौं
» कुचो समाउने हैन संयन्त्र बनाउने गर
» सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग - राज्य पुनःसंरचना आयोग जस्तो नहोस्
» राजनीतिकरणले निम्त्याएको दुष्परिणाम
» मितव्ययी प्रधानमन्त्रीको खर्चालु चाला
» गलत दिशातिर उन्मुख नेपाली समाज
» नेताहरूका अभिव्यक्ति र नैतिकताको प्रश्न